AH: ရိုက်ကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း(ဓာတ်ပုံ) - ၂
ခမျာလည်း ဒီလိုပုံရဖို့ ဒါမျိုးကို ရိုက်ယူရတော့တယ်...
ဘာမြင်ရလည်းတော့မသိ... ရိုက်တော့ ရိုက်နေတာပဲ
ခရီးသွား မှတ်တမ်းဆိုတာ ဒါမျိုးမှ အစစ်...
လူကို တိုးခိုင်းလို့မရတော့.. ကင်မရာပဲ တိုးလိုက်တော့တယ်.. စိတ်ကြီးတယ်...
လူငယ်ပေမယ့် "ဇ"ကတော့ ပြင်းတယ် ဆရာ..
ဂျီးဒေါ်ရယ်.. ပြုတ်ကျတော့မှ ဆေးခန်းရော၊ သွားဆရာဝန်ဆီရော တစ်နေ့ထဲ ရောက်နေပါဦးမယ်.
ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံးမှာ လှလှလေးပါဖို့ ဂျာနယ်လစ်တွေလည်း ဒီလိုမျိုးတိုးရတာပါပဲ..... ဒီလိုအရမ်းကာရောတိုးတော့လည်း ၁၀၀၀ တန်ဇာတ်လမ်းတွေ ထပ်ပေါ်လာနိုင်သေးတယ်။
ပါပါရာဇီ... သတိချပ်ကြကုန်လော့.... ကိုယ့်အိမ်ထဲကိုယ်နေတောင် မလွတ်ပါလားနော်...
သကောင့်သား ဘယ်ထဲက ချောင်းနေတယ်မသိ.. ရွှေပြည်ကြီးက ကားမော်ဒယ် မမလေးများလည်း သတိချပ်ကြကုန်လော့....
ရေလုံမလုံတော့ မသိဘူး... ရေထဲတော့ စိမ်နေတာဘဲ....
ပြုတ်သာကျလို့ကတော့ ကားအောက် ကွက်တိ
သြော်.. ဘာကိုများ သဲကြီးမဲကြီး ၀ိုင်းရိုက်နေကြတယ်မသိ..
မြင်ကွင်း ကျဉ်းလိုက်တာ... လူပါ ကျုံ့သွားတယ်...
ရိုက်ကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း (ဓာတ်ပုံ) - ၁ ကိုလည်း သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်....
Posted by AH at 4/08/2012 09:38:00 AM
ညိမ်းနိုင် April 8, 2012 at 10:18 AM
လာပြန်တော့လည်း ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး စိတ်ကြည်နူးရပါတယ်...။
နေ၀သန် April 8, 2012 at 11:11 AM
:)... ပုံတွေကြည့်ပြီး ပြုံးသွားမိတယ်...
စံပယ်ချို April 8, 2012 at 1:58 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) April 8, 2012 at 2:50 PM
ဒီထဲက အိုင်တင်တွေ အတိုင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ဦးမှ
အဲ ရွှေဝါရောင်တုန်းက ဂျပန်ကြီးလိုတော့ ရိုက်ချင်တော့ပါဘူး. တော်ကြာ ကိုယ်ပါ ပါသွားဦးမယ် :P
ဟန်ကြည် April 8, 2012 at 3:51 PM
အရိုက်မတော် တစ်သက်ဗျ ကိုအောင်ထွဋ်ရ...ဒီထဲက ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတော့ တကယ့်ဆလံပေးစရာပါပဲလား...ကျွန်တော်တို့တော့ အနှီလောက် မစွန့်ရဲပေါင်ဗျား...
Candy April 9, 2012 at 9:56 AM
ဓာတ်ပုံဆရာဆိုတာ ဒါမျိုးကိုခေါ်တာ :D
Unknown April 17, 2012 at 9:45 AM
အနော်လည်း ၀ါသနာကြီးပေမယ့် သူတို့လောက်တော့